Ikhambi le-Covid-19: I-Afrika iyazinakekela, ukushona kwe-Zero ngewashi eMadagascar "Abamhlophe (iWesterners) babehlele ukungcwaba i-Afrika ne-covid-19" Kulokhu, baqala ukwenza ibhokisi lapho. ITogo, ithuna lase-Ivory Coast kanye netshe lethuna eSenegal ... (VIDEO)
Nokho, umlindelo uzobe ihlelwe Mali, abalilayo eziphakeme zizakuza kithi kusuka iNiger Burkina. Abadansi bazoqhamuka eCameroon, inqobo nje uma kungamaCongo amabili, sizothumela abakhaphi ukusho inqwaba ehlukene, mkodwa emazweni kuphela avinjwe lezi imingcwabo yilezi: “IChad neGuinea Conakry nabo bonke osomnotho abaguquguquki abemukelekile. "
IMadagascar ingumsindisi; usanda kusindisa i-Afrika ngamakhambi akhe " I-Covid-organic amazwe »Ukuze 15 ilungu ka ECOWAS. Amazwe athintekayo yile: "Benin, Burkina Faso, Cape Verde, eCôte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, eTogo Guinea-Bissau. "
Manje bazokwazi ukwelapha iziguli zabo futhi bahlole ukusebenza kwaleli khambi lendabuko elihlinzekwa yiMalagasy Institute for Applied Research.
Ubhadane olubi kakhulu emlandweni kwaba umkhuhlane waseSpain wango-1918; yathatha iminyaka emi-2, kumagagasi ama-3 okungcoliswa ngabantu abayizigidi ezingama-500 abathelelekile kanye nokufa kwezigidi ezingama-50 sekukonke
Umzana waseYendouma eMali: Yendouma, uyidolobhana laseMali ezweni laseDogon eliseBandiagara, inhlokodolobha yezwe laseDogon elisendaweni engamakhilomitha angama-75 empumalanga yeMopti
Nov29 06: 00